September 7, 2020 - Amawpyay
ဂျစ်တီးဂျစ်ကန် ကောင်မလေးတွေမှာသာ ရှိနေတတ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်များ
ဂျစ်တီးဂျစ်ကန် ကောင်မလေးတွေမှာသာ ရှိနေတတ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်များ ကောင်မလေးတွေက တကယ့်ကို ပုံစံအမျိုးမျိုး ကွဲထွက်နေ ပါတယ်။ မိန်းကလေးပီပီ နူးညံ့နွဲ့နှောင်း နေရမယ့် အစား မိုက်တိမိုက် ကန်းပုံစံ ကောင်မလေးတွေ လည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီလို ဂျစ်ကန်ကန် ကောင်မလေးတွေ ကတော့ ဒီအကျင့်တွေ ရှိနေတတ် ပါတယ်။ တဇွတ်ထိုးစိတ် ရှိတယ် သူတို့တွေက လုပ်ချင်လာပြီ ဆိုရင် ရအောင် လုပ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တတ် ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက ဦးတည်ချက် တိကျတဲ့ သူတွေလို့ သတ်မှတ် ရလောက်အောင် ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားကြ ပါတယ်။ တဇွတ်ထိုး လုပ်တာ မှားတယ်ဆိုခံရပေမယ့် သူတို့ကတော့ ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်မြဲ …
ငါမရှိရင် ဘာဖြစ် သွားမယ် ထင်လဲ?
ငါမရှိရင် ဘာဖြစ် သွားမယ် ထင်လဲ? ခေါင်းရင်းအိမ်မှာ ငမူးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ညဘက်ဆိုက်ကားသိမ်း ပြန်လာရင် မူးလာတာပဲ။ ဘာတဲ့ ပါးစပ်ကလည်း ပြောလိုက်သေး “သောက်ကောင်တွေ … ကောင်မတွေ ငါမရှိရင် ဘာဖြစ်သွားမယ် ထင်သလဲ” အဲဒီစကားက ငမူး ဆိုက်ကားသမား ဘသောင်းရဲ့ လက်သုံးစကား “ငါမရှိရင် ဘာဖြစ်သွားမယ် ထင်သလဲ” လို့အော်ပြီး ရပ်ကွက်ထဲ ဝင်လာရင် မေးစရာ မလိုဘူး။ မူးလာပြီ၊ မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေကို အော်တော့မယ်။ ဆူတော့ ဆဲတော့မယ်။ ကိုယ်က ကျောင်းဆရာဆိုတော့ မူးတာတွေ ရိုင်းတာတွေ မကြိုက်တာကြောင့် ဘသောင်းနဲ့ စကားမပြော ဖြစ်အောင် ရှောင်တယ်။ မျက်နှာချင်း ဆိုင်မိရင်တောင် မျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်။ သူ့ဆိုက်ကား …
ငါတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပီးတဲ့အခါ ယောက္ခမဖြစ်တဲ့ နင့်မိဘ အိမ်ရော ငါ့မိဘ အိမ်မှာရော ငါမနေနိုင် ဘူး. ကိစ္စတခုခုဖြစ် လာတိုင်းဘယ်သူ့မျက်နှာကြည့်နေ ရလို့ ဆိုတဲ့ အရှိန်အဝါအောက်မှာ နင်ရောငါရော မွန်းကျပ်မှာ စိုးလို့ပါ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးနဲ့ မနေနိုင် သေးရင်တောင် အိမ်လေးငှါးပီး သီးသန့်နေကြ မယ်လေ မနက်စောစော နင်စားဖို့ အတွက် မနက်စာ ငါပြင်ဆင်ပေးနေ တဲ့အချိန်မှာ နင်က တံမြက်စည်းလေးလှည်းပေးပေါ့ နင်ရောငါရော အလုပ်လုပ်နေ ရတဲ့ အတွက် ဘယ်သူပဲ အရင် ဆုံးပြန် လာလာ နောက်ကျမှရောက်တဲ့ သူကို ရေအေးလေး တခွက်နဲ့ကြိုပီး နဖူးလေးပေါ် နမ်းလို့ အမောဖြေကြ မယ်လေ ညစာကို ငါချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်ပီးတဲ့ …
ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး နွားအဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန် တင်နိုင်တော့မည် မြန်မာပြည်က နွားလေး
ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး နွားအဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန် တင်နိုင်တော့မည် မြန်မာပြည်က နွားလေး ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး နွားအဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန် တင်နိုင်တော့မည် မြန်မာပြည်က နွားလေး အကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်နော် ။ အဆိုပါ နွားလေးက မန္တလေး ဘက်ကလို့ သိရပါတယ် ။ မန္တလေးမြို့ ၈၀ – ၈၁ လမ်းကြား ၂၆ လမ်း၂၇ လမ်းကြား ရွှေတိုက်ဝင်းထဲမှာ ရှိ တယ် လို့ သိရ ပါတယ်။ လေ့လာ သိရှိ ရအောင် တင်ပြပေး ရခြင်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ နွားလေးက ၁၈ လက်မ …
မျက်နှာပြောင်တဲ့ ချစ်သူမိန်းခလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ အားသာချက် (5) ချက်
မျက်နှာပြောင်တဲ့ ချစ်သူမိန်းခလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ အားသာချက် (5) ချက် သင့်ချစ်သူ ကောင်မလေးဟာ အမြဲတမ်း ရယ်စရာ ဟာသတွေ ပြောပြီး မျက်နှာပြောင် တတ်သူ တစ်ယောက်ဟုတ်တယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ကံအကောင်းဆုံး လူသား တစ်ယောက်ပါ။ ယောင်္ကျားလေး ဆန်ပြီး ဟာသဥာဏ် ထူးကဲတဲ့ ကောင်မလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူအပေါ်မှာ ယုံကြည်စိတ် အပြည့်အ၀ ရှိတဲ့အပြင် ဘ၀ခရီး တစ်ခုလုံးကိုပါ သင်နှင့် အတူ ဖြတ်သန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို ကောင်မလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားခွင့် ရတဲ့ ဘော်ဒါတို့အတွက် ဘယ်အချက်တွေဟာ ကံကောင်းစေလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြ …